WASIIR isku dilay cudurka CORONAVIRUS dartiis - NorSom News
N.B: Si aad ula socoto wararka NorSom News oo maqal iyo muuqaal ah, halkan riix, kadibna Subcribe/Abonner.
Sida ay qoreen warbaahinta dalka Jarmalka, wasiir ka tirsanaa wasiirada dalkaas isku dilay sabab la xiriirta cudurka sida weyn ugu faafayo addunyada ee Coronavirus.
idoo kale Booliiska iyo Xeer Ilaalinta waxey si wadajir ah u sheegeen iney arkeen xaqiiqooyin, sidoo kalana wareysiyo lala yeeshay dad goobta ku sugnaa waxey qirayaan in masuulka uu isaga is dilay.
Previous articleFalanqeyn: Asalka khilaafka masaajidka Towfiiq iyo xalkiisa.
Next articleFHI: 201 soomaali ah ayaa laga helay corona-virus.